Goolasha Sawirada ee Shabakadda: Talooyin Waxtar leh Kala Saaridda
Maalmahan, xogtu waxay noqon karaan hantidaada ugu muhiimsan. Sidaa darted, marnaba ma aha fikrad fiican inaad u ogolaato in ay ku riixdo gacantaada tartamayaasha. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood waxay noqon kartaa mid caqabad ku ah inay ka hortagaan arintaan sababtoo ah xoqitaanka sawirrada. Tani waa farsamo oo sannado badan loo isticmaalay in laga soo saaro xogta bogagga shabakadda - tanks for vape pens.
Tilmaamahani wuxuu keenayaa laba dhibaato oo muhiim ah shirkad. Ugu horeyntii, xogta waxaa loo isticmaali karaa in faa'iido laga helo ganacsi laga yaabo in ay hoos u dhigto qiimaha iyo sidoo kale helitaanka macluumaadka ku saabsan alaabta. Sidoo kale, haddii la sameeyo si joogto ah, farsamada ayaa sidoo kale laga yaabaa in ay hoos u dhigto waxqabadka website-ka.
Guud ahaan, xoqitaanka sawirku waa fikrad la abuuray barnaamijyadii hore ee kicinta dabaysha dhawr sano ka hor. Waa farsamaynta barnaamijka oo soo saara macluumaadka laga helo muraayadaha kuwaas oo loogu talagalay in lagu saleeyo bini'aadanka. Barnaamijku wuxuu ku taliyaa in uu ahaado bini'aadan wuxuuna akhriyaa xogta, ururinta macluumaadka qiimaha leh iyo ka shaqeynta kaydinta.
Farsamada ayaa si weyn u kordhay sanadihii la soo dhaafay, gaar ahaan khudbadda beeralayda webka..Waxaa sii kordhay xitaa horumarinta sawirrada e-tafaariiqda, tusaale ahaan, isbarbar dhiga qiimaha qiimaha. Websaydhadaan waxay shaqaaleeyaan barnaamijyo kuwaas oo si joogto ah u booqda e-tafaariiq caan ah si ay u helaan qiimaha ugu dambeeyey iyo sidoo kale helitaanka macluumaadka badeecada ama adeegga la siiyo. Xogtaas ayaa markaa lagu keydiyaa xogta oo waxaa loo isticmaalaa inay bixiso dib u eegis isbarbardhiga ah ee muuqaalka e-tafaariiqda.
Xogta tartan ee tartanka waxay leedahay saameyno kala duwan oo ku saabsan nidaamyada IT ee shirkad taas oo ah tusaale kale oo ka mid ah gaadiidka aan loo baahnayn. Daraasadihii ugu dambeeyay waxay xaqiijiyeen in ugu yaraan 61% dhammaan taraafikada ay soo saaraan qoryo. Kootadaasi waxay isticmaalaan khayraadka muhiimka ah iyo sidoo kale xawaaraha bandhiga loogu talagalay dadka isticmaala internetka kuwaas oo laga yaabo in ay keenaan kororka qadarka latency ee macaamiisha dhabta ah.
Tirada sawiradu waxay socotay muddo dheer. Si kastaba ha noqotee, ma ahan ilaa dhawaa in dhibanayaasha dabeecaddaani ay bilaabaan inay falceliyaan. Qaarkood waxay ku doodeen dhaqdhaqaaqyo ganacsi oo aan caddaalad ahayn iyo jabinta xuquuqda lahaanshaha iyada oo ay ka duwan tahay shirkadaha ka shaqeynaya xoqidda inay isdifaacaan iyaga oo dalbanaya xorriyadda macluumaadka.
Meelo badan oo website-yo ah ayaa ku soo rogay qorista siyaasadaha isticmaalka boggooda internetka kaasoo mamnuucaya burburinta gardarrada. Nasiib darro, ma fulin karaan nidaamyadan, sidaa darteed dhibaatadu uma muuqato in ay mar uun tagto.
Sannad ka hor, eBay waxay soo bandhigtay API kaas oo u oggolaanaya xoqooyinka saxda ah si ay u helaan macluumaadkaaga. Si kastaba ha noqotee, ma joojinayso goosashada macluumaadka xaasidnimo ee loo isticmaali karo faa'iidada tartanka. Ilaalinta kaliya ee dhabta ah waxaa laga heli karaa iyada oo la adeegsanayo tiknoolajiyada kaas oo xakamayn kara dadka aan dadka ahayn ee booqda boggaaga. Tani waxay u oggolaaneysaa isticmaalayaasha dhabta ah inay galaanaga internetkaaga halka ay xakameynayaan kuwa gurguuranaya inay waxyeeleeyaan.
Siyaabaha kale ee waxtarka leh ee ka soo horjeeda xajinta sawirrada waxay ku xiran tahay isticmaalka farsamooyinka sida sirta IP-ga ee sirta ah, oo la xariiro ilaha IP-ga, falanqaynta habdhaqanka jawaab-celinta, qiimeynta heerka khatarta waqtiga, iyo geo-goobta fulinta.